Planet Nibiru - tozọ njedebe nke ụwa | TeraNews.net
Planet Nibiru - uzo nke njedebe nke uwa
na-ede akwụkwọ nka E bipụtara 15.09.2018
Ọzọkwa, ìgwè dị iche iche nke ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkachamara na-ekwu na mbara ala Nibiru na-eru nso ,wa, nke ga-emebi usoro mbara igwe. Ọzọkwa, vidio ndị nwere ụgbọ elu ndị ọbịa na-efe efe na mbara igwe na-emetụta netwọk mmekọrịta. Ala ọma jijiji na mgbawa ugwu ugboro ugboro na Eshia na-aghọ ihe ndị a ga-eme tupu ọgwụgwụ ụwa.
Planet Nibiru - nnukwu ihuenyo
Bido site na ịchọ azịza nke ndị a bụ: “otu ndị sayensị,” “ndị na-ahụ maka sayensi,” ma ọ bụ “ndị ọkachamara.” Ọ gaghị ekwe omume ịchọta aha prọfesọ nke sayensị na nyocha mbara igwe na "ndị ọkà mmụta sayensị". Echoes of Planet X dị na ntanetị na CNN. Ebee ka Prọfesọ Ethan Trowbridge si kwuo, bụ naanị ọnụnọ nke Nibiru, mana eziokwu bụ ihe efu.
Ọdachi ụwa bụ nnukwu enyo maka aghụghọ ego
Mana Anatoly Wasserman, Odessa, amaara ndị Ukraini, doro anya na “ndị ala ọzọ” na “Nibiru” na-eche nsogbu akụ na ụba ụwa ọhụrụ. Usoro ego IMF weghachite na 2008 afọ, gbawara agbawa, ọdịda na-apụghị izere ezere. N'ezie, n'ime afọ 10, United States edozila ọnọdụ ahụ n'ahịa nke ya.
Ha malitere ikwu banyere nsogbu ọhụụ na mbido 2018, mgbe onye nyocha Bank nke America Michael Hartnett kwuru nkwupụta uche. Akụkọ dị na mgbasa ozi agbaghị ogologo. “Onye ozi nke apocalypse” na - ewere ọnọdụ nsogbu ego, - Planet Nibiru.
N’ọnọdụ a, ọ ka mma ịghara ịtụ ụjọ, kama ịmalite ịkwado maka oge ihe isi ike. Onye Belarusia nke na-ahụ maka akụ na ụba Leonid Zlotnikov na-atụ aro ịkwụghachi ego mgbazinye ngwa ngwa ma gharakwa ịbanye n'ụlọ akụ. Ọ na-adụ ọdụ ka ichekwaa ego na mgbakwunye na ego ala ọzọ nke 3-4 na ịghara ichefu banyere ngwaahịa nke ngwaahịa na pantry.
Ihe ọzọ US megidere ụmụ mmadụ
Site na 2021 ọhụrụ, ndị draịva SSD ga-ada na ọnụahịa
Kpọọ m azụ, biko - ịgba alụkwaghịm ahụ enweghị oke